२ अविवाहित केन्द्रिय नेताहरुको पार्टी बैठकमै यस्तो… के यो जोडी मिलेकै हो त ? – Rastriyapatrika
२ अविवाहित केन्द्रिय नेताहरुको पार्टी बैठकमै यस्तो… के यो जोडी मिलेकै हो त ?
नायारयणकाजी श्रेष्ठ नेकपाका प्रबक्ता । कोमल आली नेकपाबाटै राष्ट्रिय सभाकी सांसद । एउटै पार्टीमा रहेका श्रेष्ठ र ओली दुबै अविवाहित । यी दुई अविवाहितको प्रसंगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो बैठक कुनै पनि एजेण्डामा छmफलनै नगरी अर्कोपटक बस्नेगरी स्थगित भएको थाहा भएको छ ।
गत ८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय हाई कमाण्डको बैठकमा प्रदेश कमिटीको पुर्णतापछि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनसम्बन्धी एजेण्डा छलफलका लागि राखिएको् थियो । तर, त्यस एजेण्डामा छलफल प्रवेशै नगरी बैठकको ध्यान एकाएक एउटा फोटोतर्फ मोडियो ।
श्रेष्ठ र कोमल एउटै मञ्चमासंगै रहेको एउटा पत्रिकामा प्रकाशित फोटो हेर्दै अध्यक्ष ओलीले अविवाहित जोडीलाई कस्तो सुहाएको भन्दै ठट्टा गर्न सुरु गरेपछि बैठकको माहोल हाँसोठट्टातर्फ मोडियो । त्यसो त प्रचण्ड,माधव नेपाल,झलनाथ खनाल,इश्वर पोख्रेल देखि सबै नेताले त्यही फोटोको प्रसंगमा धेरै ठट्टा गर्न भ्याए । यतिसम्मकि अविवाहित काजीलाई साँच्चै कुमारचाहिँ हो कि होइन भन्नेदेखि कोमलसंगको चिनजानबारे समेत नेताहरुले जिज्ञासा राखे ।
९ गते गृहकार्य गरेर ११ गते बस्ने गरी बैठक टुंगिए पनि गृहकार्य नपुगेको भन्दै त्यस दिनको बैठक पनि सारिएको थियो । बैठक पुन बस्ने भनिए पनि प्रस्तावित एक दर्जन एजेण्डामा भने सचिवालयमा गतिका साथ गम्भीर छलफल भएको छैन । बुधबार साप्ताहिकबाट साभार